आतंकवादीद्वारा काबुल विमानस्थलमा रकेट आ’क्र’मण, के छ अबस्था ? — Imandarmedia.com
आतंकवादीद्वारा काबुल विमानस्थलमा रकेट आ’क्र’मण, के छ अबस्था ?
एजेन्सी। काबुल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई निशाना बनाएर सोमबार आतंकवादीले पाँच वटा रकेट बम प्रहार गरेका छन्। तर यो रकेट आक्रमण अमेरिकी एन्टी मिसाईल प्रणालीद्वारा असफल भएको अमेरिकाले जनाएको छ। बीबीसीका अनुसार हालसम्म आतंकवादी आक्रमणबाट हताहतीको मामिला सार्वजनिक भएको छैन।
काबुलको यस विमानस्थलबाट अमेरिकाले भोलिसम्म आफ्ना नागरिक र सेना स्वदेश फर्काइसक्नुपर्नेछ। अमेरिकीहरु स्वदेश फर्किने पूर्व संन्ध्यामा यो आ’क्र’मण भएको हो। यो विमानस्थलमा कम्तिमा ५ हजार अमेरिकी सेना अहिले तैनाथ छन्। यसअघि गतहप्ताको बिहीबार आईएस–के आतंवादी समूहले यही विमानस्थल बाहिर विस्फोटन गराउँदा १७० जनाको मृत्यु भएको थियो। सो आक्रमणमा १३ अमेरिकी सेनको पनि ज्यान गएको थियो। त्यसको भोलिपल्टै अमेरिकाले ड्रोन आक्रमणबाट सो आ’क्र’मणका योननाकारको मृत्यु भएको अमेरिकी दाबी थियो।
हालसम्म सोमबारको आक्रमणको जिम्मा कसैले लिएको छैन। यद्यपी आईएस–के समूह नै यो घटनामा संलग्न भएको अनुमान छ। आईतबार मात्र अमेरिकाले पुनः दोस्रोपटक आईएस समूह लक्षित अर्को आक्रमण गरेको थियो। अमेरिकाका अनुसार यो आक्रमणमा काबुलको विमानस्थलमा आत्मघाती विस्फोटन गराउन आउने आईएसका सदस्यको मृत्यु भएको छ।
के ३१ अगष्ट अर्थात् भोलिपछि पनि तालिबानले कसैलाई अफगानिस्तान बाहिर जान देलान् ?
तालिबानले ३१ अगष्ट अर्थात् भोलि मंगलबारपछि पनि वदेशी नागरिकलाई अफगानिस्तान छाड्न दिने वाचा गरेको बेलायतसँगै विश्वका झन्डै सय देशले बताएका छन्।
अमेरिकाले भोलिसम्ममा आफ्ना नागरिक, कूटनीतिज्ञ तथा सेनाहरु अफगानिस्तानबाट फर्किसक्ने बताएको सन्दर्भमा बेलायत लगायतका राष्ट्रले तालिबानले विदेशी नागरिकलाई भोलिपछि पनि फर्कन दिने बताएका हुन्।
समाचार एजेन्सी पीएकाअनुसार बेलायती विदेशमन्त्रीले जी–७ राष्ट्र, नेटोमा आवद्ध राष्ट्र र टर्की र कतारसँग यही विषयमा छलफल गर्न लागेका छन्।
जी–७ मा विदेशमन्त्री डोमिनिक राबले तालिबानले मानवअधिकारको सम्बन्धमा गरेको वाचा पुरा गर्छन् या गर्दैनन् भन्ने विषयमा अन्य राष्ट्रका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्नेछन्। तालिबानले चाल्ने कदमपछि आफूहरुले कस्तो प्रतिक्रिया जनाउने भनेर त्यहाँ छलफल हुनेछ
तालिबानले भन्योः सर्वोच्च नेता मुल्ला हिब्तुल्लाह चाँडै सार्वजनिक
तालिबानका अनुसार उनीहरुका सर्वोच्च नेता मुल्ला हिब्तुल्लाह अखुन्दजादा अब चाँडै सार्वजनिक रुपमा देखा पर्नेछन्। तालिबानले बीबीसीलाई हिब्तुल्लाहबारे जानकारी दिँदै हाल उनी कान्दाहर प्रान्तमा भएको बताएका छन्।
हिब्तुल्लाह एक धार्मिक विद्वान हुन् जो सन् २०१६ मा तालिबानका प्रमुख बनेका थिए। तालिबान शक्तिशाली हुनुमा उनको हात भएको बताइन्छ। सन् १९८० को दशकमा रुसी सेनाविरुद्ध उत्रिएका नोतामध्ये हिब्तुल्लाह पनि एक हुन्। तर उनी सैन्य कमान्डरभन्दा बढी धार्मिक नेता हुन्।
तालिबानको राजनीतिक टोलीका प्रमुख तथा तालिबानका सहसंस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर यसअघि काबुल पुगेर अहिले कान्दाहर पुगिसेका छन्। तालिबानका प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिदले अफगानिस्तानमा सरकार गठनको वार्ता चलिरहेको बताइरहँदा हिब्तुल्लाह र बरादरमध्ये एक देशको राष्ट्रपति बन्ने चर्चा चलिरहेको छ।
हिबातुल्लाह अखुन्दजादा अफगान तालिबानका प्रमुख नेता हुन्। उनी इस्लाम धर्मका विद्वान हुन् जो कान्दहारबाट आएका हुन्। उनले नै तालिबानको दिशा बदलेर अहिलेको अवस्थामा ल्याइपुर्‍याएको ठानिन्छ।
तालिबानको गढ रहेको कान्दहारसँग जोडिएका कारण उनले तालिबान नेतृत्वमा आफ्नो पकड बनाउन सकेको ठानिन्छ। सन् १९८० को दशकमा उनले तत्कालीन सोभियत सङ्घको विरुद्ध अफगानिस्तानमा विद्रोहका एक कमाण्डरको भूमिका खेलेका थिए।
तर उनको पहिचान एक सैन्य कमाण्डरको रूपमा भन्दा पनि एक धार्मिक विद्वानको रूपमा ज्यादा भएको पाइन्छ। अफगान तालिबानका प्रमुख नियुक्त हुनुभन्दा पहिले पनि उनी तालिबानका शीर्ष नेताहरूमध्ये रहेका थिए। धर्मसँग जोडिएका आदेशहरू उनै दिन्थे।
उनले दोषी पाइएका हत्यारा वा अवैध यौन सम्बन्ध राख्नेहरूलाई हत्याको सजाय तथा चोरी गर्नेहरूलाई हात काट्ने सजायका आदेश दिएका थिए। हिबातुल्लाह तालिबानका पूर्व प्रमुख मोहम्मद मन्सुरका उपप्रमुख पनि थिए। सन् २०१६ को मे महिनामा अमेरिकी ड्रोन हमलामा मन्सुरको मृत्यु भएको थियो।
मन्सुरले आफ्नो इच्छापत्रमा हिबातुल्लाहलाई आफ्नो उत्तराधिकारी घोषित गरेका थिए। करिब ६० वर्षका हिबातुल्लाहले जीवनको धेरै समय अफगानिस्तानमै बिताएका छन्। हिबातुल्लाहको नामको अर्थ हुन्छ, ‘अल्लाहको तर्फबाट प्राप्त उपहार।’ उनी नुरजाई समुदायबाट आएका हुन्
तालिबानको वर्तमान नेतृत्व संरचनामा हिबातुल्लाह अखुन्दजादा शीर्ष स्थानमा छन् र उनी राजनीतिक, धार्मिक तथा सैन्य मामिलाका प्रमुख रहेका छन्। राजनीतिक मामिला हेर्ने उनका उपप्रमुख मुल्लाह गनी बरादर हुन्।
सैन्य मामिला हेर्ने उपप्रमुख चाहिँ पूर्व तालिबान प्रमुख तथा संस्थापक नेता मुल्लाह ओमारका छोरा मुल्लाह मोहम्मद याकुब हुन्। हक्कानी सञ्जालका प्रमुख समेत रहेका सिराजुद्दिन हक्कानी पनि हिबातुल्लाहका अर्का उपप्रमुख हुन्।
मुल्लाह अब्दुल हकीम तालिबानका वरिष्ठ न्यायाधीश हुन् र उनले तालिबानको न्यायिक संरचनाको अगुवाइ गर्छन्।
तालिबानको एउटा नेतृत्व परिषदपनि रहेको छ। २६ सदस्य रहेको रहबारी शुरालाई तालिबानको उच्चतम सल्लाहकार परिषद् तथा निर्णायक समूह मानिन्छ।